नेताले ‘गुट’को भेलामा बोलाए रु. एक हजार माग्नूः योगेश भट्टराई « Pahilo News
नेताले ‘गुट’को भेलामा बोलाए रु. एक हजार माग्नूः योगेश भट्टराई
प्रकाशित मिति : 25 August, 2016 6:00 pm
९ भदौ । नेकपा (एमाले) सचिव योगेश भट्टराईले एमाले अब सिंहदरबार छिर्दा बहुमतसहितको पहिलो पार्टी भएर मात्र छिर्ने दाबी गरेका छन् ।
युवा संघ नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘युवाका स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । ‘एमालेलेको नौ महिने सरकार लोकप्रिय बन्यो । एमालेले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि लोकप्रिय थिए,’ उनले भने, ‘तर एमालेलाई सिंहदरवारबाट निकाल्न मधेसमा आन्दोलन भयो ।
अब एमाले बहुमतसहित सिंहदरबार छिर्छ । त्यसपछि मात्र मुलुकले आर्थिक सम्बृद्धिको दिशा समात्छ ।’ उनले एमालेले अघि सारेका फाष्टट्यकm हुलकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्तो योजनाले पनि त्यसपछि गति लिने दाबी गरे ।
गुटको भेलामा बोलाउँदा एक हजार माग्नु
एमाले सचिव भट्टराईले सबै कार्यकर्ता रोजगारीमा लागे पार्टीमा गुट कम हुने दाबी गरे । ‘काम नभएकाहरुले हो गुट गर्ने,’ उनले भने, ‘काम भएको र रोजगारी भएको मान्छेले गुट गर्न भ्याउँदैन । पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यकर्तालाई गुटको भेलामा बोलायो भने ऊ आफ्नो व्यवसाय चौपट हुन्छ भनेर जाँदैन । त्यसकारण सबै कार्यकर्ता रोजगारीमा लागे भने कसरी पार्टीमा गुट चल्छ ?’
उनले फुर्सद भएका कार्यकर्ताले पनि गुटको भेलामा बोलाए पहिला एक हजार माग्न सुझाव दिए । ‘नेताले गुटको भेलामा बोलाए भने पहिला एक हजार माग्नु,’ उनले भने, ‘नेताले लौ आउनु दिन्छु भनेको अवस्थामा त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर सोध्नु । त्यसपछि कहिल्यै बोलाउँदैनन् ।’
केपी, माधव, झलनाथ र वामदेव गुटको अन्त्य गरौँ
भट्टराईले अहिले पार्टीमा केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम गुट भएको भन्दै त्यस्ता गुटको अन्त्य कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘गुटका कार्यक्रममा एक दिन पनि गयल नहुने अखिल, युुवा संघका कमरेडहरुलाई म भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामी बरु बेलाबखत गयल भएका छौँ । तपाईँहरु गयल नभई जानुहुन्छ । अब यसको अन्त्य गरौँ ।’
सिंहदरबारसँग मधेसले ‘ब्याकमेलिङ’ गर्यो
एमाले सचिव भट्टराईल मधेस केन्द्रित केही दलले सिंहदरबारसँग ‘ब्याकमेलिङ’ गरेको पनि आरोप लगाए । ‘मधेस आन्दोलनको नाममा सिंहदरबारसँग ‘ब्याकमेलिङ’ गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले एनजीओ, आइएनजीओ र विदेशी डलरकाले सिंहदरबारको सत्ता चलाउने सपना पूरा हुन दिदैन ।’ उनले मधेसका केही दलाल र जमिनदारले सिंहरदबारलाई एनजीओ, आइएनजीओ र विदेशी डलरकाले चलाउन खोजको आरोप लगाए । ‘पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा ५० जना सहिद भए भन्नेहरु पछि त्यो संख्या बढाउँदै ६८ पुर्याउँछन् भने त्यसलाई के भन्ने,’ भट्राईले मधेस केन्द्रित केही दलको नियतप्रति शंका गर्दै भने, ‘मधेस आन्दोलनका नाममा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई दिइने १० लाख रुपैयाँ उनीहरुको परिवारलाई होइन पार्टीको खातामा चाहिन्छ भन्नेहरुको नियत मैले धेरै भन्नु पर्दैन ।’
राजदूत र श्रमसहचारीलाई विदा मनाउन पठाएको होइन
भट्टराईले विभिन्न देशमा पठाइएका राजदूत र श्रमसहचारीलाई विदा मनाउन पठाएको नभई ती मुलुकमा भएका नेपाली नागरिकको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न पठाएको उल्लेख गरे । ‘अहिले राजदूत र श्रमसहचारीले आफू विदा मनाउन गएको जस्तो गरेका छन्,’ उनले भने ‘जबसम्म त्यो संस्कारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनले खाडीलगायतका मुलुकका राजदूत र श्रमसहचारीले अझ त्यहाँ कामको सिलसिलामा पुगेका नेपालीको हितमा काम गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
नेपाल रोजगारदाता मुलुक
भट्टराईले नेपाल रोजगारीमा जाने मात्र नभएर रोजगारदाता मुलुकसमेत भएको दाबी गरे । उनले नेपालीहरु काम नपाएर रोजगारीका लागि विदेश गएको भन्ने कुरा पनि गलत भएको दाबी गरे । उनले नेपालमा रोजगारीको अवसर प्रसस्त भएको भन्दै उनले १० लाख बढीलाई रोजगारी दिन सकिने बताए ।